Isi kpatara nke eletrik njehie CNC lathe ọrụ
Isi kpatara nke eletrik njehie CNC lathe ọrụ kacha akpata eletrik na njehie na ime ihe nke CNC lathes bụ na n'ichepụta nkenke nke ọ bụla eletrik akụrụngwa bụghị elu, echichi ziri ezi bụ bụghị elu, na-eyi nke eletrik n'oge were n'anwụ. Eletrik erro ...GỤKWUO »
CNC lathe mmezi servo oriri usoro nsogbu
1.1 Overtravel Mgbe ndepụta ngagharị karịa ndị software ịgba setịpụrụ software ma ọ bụ ngwaike ịgba kpebisiri ike site ịgba mgba ọkụ, ihe overtravel mkpu ga-eme, na mkpu ọdịnaya ga-egosipụta na CRT. Dị ka CNC usoro ntuziaka, kpatara ike iwepụ. , Welie the ...GỤKWUO »
Common mmejọ na CNC machining center servo usoro
Common mmejọ na CNC machining center servo usoro ka anyị niile maara, ndị machining center servo usoro bụ a usoro na-enye ike na igwe ngwá ọrụ. Enweghị servo usoro machining center, na workpiece ike-esichara. Ya mere, servo usoro dị ezigbo mkpa na machining OA ...GỤKWUO »
Bụ machining ígwè n'akụkụ ke CNC machining center ọma ma ọ bụ ike?
Akpa, machining ígwè akụkụ na CNC machining emmepe dị mma maka ike rails ma ọ bụ ihe ọma n'ihi rails. Iron akụkụ ndị dịtụ nkịtị workpieces. Ọtụtụ ahịa ga-ajụ ma ọ bụrụ na ndị machining center na-adịghị eji na machining center hazie ígwè akụkụ. Bụ "CNC machining center ...GỤKWUO »
Gịnị bụ agụụ Chuck nke CNC machining center?
1. Gịnị bụ CNC agụụ Chuck? Agụụ mmiri iko, makwaara dị ka agụụ spreaders, bụ otu n'ime ndị agụụ actuators. Ke ofụri ofụri, na ojiji nke agụụ chucks jidere isiokwu bụ otu n'ime ndị dị ọnụ ala ụzọ. Agụụ chucks dị na a dịgasị iche iche nke ekwekọghị. Mmiri iko mere nke roba nwere ike ...GỤKWUO »
Okwu: 1022, Iwuli 1, Mara Commercial Plaza, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province China